Kugadzira Iyo Dhijitari Roadmap YePamberi-Ekutarisa Mabhizinesi | Martech Zone
Kubva pakatanga denda, takaona shanduko yedhijitari, nekuchinja kuenda kubasa kure uye nekuwana kwakawanda kwedhijitari kumasevhisi kupfuura nakare kose - chiitiko chingangoenderera mushure mehutachiona. Maererano ne McKinsey & Kambani, takasvetuka makore mashanu kumberi mukutenga uye bhizinesi kutorwa kwedhijitari mune imwe nyaya yemavhiki mashoma. Kupfuurisa 90 muzana yevatungamiriri vanotarisira kudonha kubva kuCOVID-19 kuchinja zvakanyanya maitiro avanoita bhizinesi mukati memakore mashanu ari kuuya, neakawanda sekuratidza denda iri richava nemhedzisiro inogara pahunhu hwevatengi uye zvavanoda. Chokwadi, 75 muzana yevatengi vakagamuchira dhijitari kekutanga kubvira chirongwa chehosha yekuenderera mberi-COVID-19. Ivo vanobatana neuto rinokura re Vakabatana Vatengi, avo chete vanofambidzana nema brand kuburikidza nemadhijitari chiteshi senge mawebhusaiti nemaapp.
Vakabatana Vatengi, kutenderera chizvarwa chese, vari hyperaware yeiyo yakazara brand chiratidzo uye vakura kujaira kune epamusoro epamhepo masevhisi. Vatengi ava vanofananidza zviitiko zvakanaka nezvakaipa, kwete zvinokwikwidza zvigadzirwa nemasevhisi. Vachatonga chiitiko cheUber neicho cheAmazon, uye chiitiko chinonyanya kufadza chichava tarisiro yavo shoma kune inotevera. Kudzvinyirira kuri kuenderera mberi kukwira kumakambani kuti anyatsocherechedza zvigadzirwa kunze kwenzvimbo yavo uye kufambirana neazvino zvigadzirwa. Chirevo cheHBR chinotaura chikonzero chekutanga chinopfuura hafu (52 muzana) yeFortune 500 yakanyangarika kubvira gore 2000 kukundikana kwavo kuita shanduko yedigital. Kuona nzira dzemadhijitari dziri kuenderana, kana zvirinani pane, vakwikwidzi vakananga uye zvisina kunangana zvichave zvakakosha mukukura kwakasimba.
Kuvandudza Rwendo rweVatengi
Nharaunda yanhasi ine hukama hwakabatana, pamwe nekukanganiswa nedenda, yawedzera tarisiro yevatengi yebasa redhijitari rinotamba mune ruzivo rwemuviri. Kune makambani mazhinji, rwendo rwevatengi rwepamhepo runowanzo kutyorwa uye nderechinyakare, sezvo zvave kunyanya kunetsa kuti vatengi vave neruzivo rwakanaka pavanenge vachiita neyakagadzirwa manhamba.
COVID-19 yakawonekawo mamwe asina kuzivikanwa marwadzo evatengi madigital anogona kubatsira kugadzirisa. Zvinhu zverwendo rwevatengi zvakakonzera kushushikana pre-denda, sekumirira mumutsetse uye kubhadhara, zvinofanirwa kuitwa sekuti hazvibate uye zvakachengeteka sezvinobvira, kudaidzira kupindirana kwedhijitari. Iyo bar yekugona ikozvino yakwira zvakanyanya; Shanduko-refu-refu mukutarisira kwevatengi kwekushomeka kwekudyidzana kwevashandi kucharamba kuripo.
Kuti sangano ritange shanduko kune ramangwana ravo redhijitori, zvakakosha kuti ufambe nekukurumidza uye nechinangwa, uye kubvisa masilosi. Kushambadzira kweBrand, ruzivo rwevatengi, kuvimbika uye mashandiro zvinofanirwa kusangana mukutsigira zvinangwa zvakajairika. Kugadzirisa rakaputswa rwendo rwevatengi uye kuzadzisa zvinangwa zvekukura, munhu wese ari musangano anofanira kubatana kutenderedza zvakajairika dhijitari chiratidzo. Chiratidzo ichi chinofanirwa kushandurwa kuti chiitwe nekuvandudza zvirongwa zvemadhijitari - kwete zvirongwa zvemadhijitari - zvine mutsindo usingaregi kumutengi. Masangano akaremerwa nepfupi-pfupi chirongwa chepfungwa uye zvikwata zvakatumirwa zvinowanzo gadzira zvisingafadzi zviitiko zvevatengi uye zvosiya mikana yakakura yekukura patafura. Kune rimwe divi, zviito pane zvakajairika kuona kweyekunakisa kwedhijitari kunopa mibairo inovimbisa. Achave iwo makambani ane zvikwata zvakabatanidzwa - vachishandisa, kudzidza kubva, uye kuita pane zviono zve data - izvo zvichakwanisa kufamba nekukurumidza-chiratidzo-chemberi.
Sangano rinogona sei kuona iro dhijitari chiratidzo?
Uine chiratidzo chenguva refu mumusoro, kutsanangura zvine hungwaru, kuyerwa kwekambani-yakakura kukura zvakakosha kwakakosha. Izvi zvakakosha zvinogona kuenderana nekusiyanisa, kukosha, mhando, kana kuyera kukwikwidza kwemitambo yekutamba, uye inofanirwa kusunga kune yakazara kambani chiratidzo chedigital.
Kunyangwe yakanangana nerwendo rwekambani yega yega uye nhanho yazvino yekukura kwedhijitari, heano mamwe maitiro akakosha bhizinesi rega roga rinofanirwa kufunga nezvekuve padhijitari kugadzirira izvo zvitsva zvakajairwa:
Zvakareruka, zvisingakanganwike, zvakagadziriswa zviitiko - bvumira vatengi kukurumidza uye nyore nyore kuita zvavanoda kuita
Regedzera kuita kwako pese pazvinogoneka - shandisa tekinoroji kushandira zvirinani zvinodiwa nevatengi
Kurudzira kuwanda uye kutyaira kuvimbika - shandisa simba re data kuti unzwisise maitiro uye kukurudzira zviito
Sanganisa matekinoroji aripo uye sunga masimba avo eboka - iyo chete nzira yekukura inokwira ndeyakanaka-yakarongedzwa uye ine simba tech teki
Pazai silos - tsvaga nzira dzekushandira pamwe nemaune kune hukuru hukuru
Zano rakawandisa iro bhizinesi chero ripi zvaro raanogona kutora mubhodhi mune ino mamiriro ekunze kuronga ramangwana, kwete nhasi. Chiratidzo chega chega chinofanirwa kunge chiri kurwira nekuchengetedza yakazara dhizaini nzira yekufambisa kugadzikana uye kukura kwemari. Kana dambudziko ratidzidzisa chero chinhu, nderekuti hapana imwe nguva iri nani yekuronga nekuvandudza nyika iri kuramba ichiwedzera.
Tags: chinjazvakabatana vatengiCOVID-19digital roadmapdigital maonero